musha / zvishongedzo / Bathroom accessories / WOWOW Yakatswanywa Goridhe Bathroom Towel Bar
Wall yakarongedzwa tauro akabata imwe bar 304 premium-giredhi simbi isina simbi: Hardy zvinhu, iine Great Posture Ability, inogona Kuremedza uremu hwetauro rakanyorova kana yekugezesa yakasimba, kwete Ripidyo Kudonhedza kure.
Nickel tauro bhara rimwe goridhe tsananguro 4020201BGD: 1.95 lbs, 23 inches, inoita mushe mukutakura kugona, yakareba zvakakwana kuti akawanda mataira akarembera, ayo anoita kuti iwe chimbuzi uve wakachena uye wakachena.
Bronze goridhe kumusoro: zvakaenzana ive yakajeka kutaridzika uye mhando.
Yakakwana kushandiswa mumakamuri ekurara, yekugezera, kicheni, yekuwachira nzvimbo, patio, nzvimbo dzekutandarira uye nzvimbo dzekupaza.
Shandisa yakavezwa yakapeteka anchor mounts uye setup template yekukurumidza uye isinganetsi kuisirwa.
Isu tinoshanda takananga nemafekitori edu Kugutsa hukuru Hukuru zviyero, uye yedu yekuomarara Yakanakisa yekudzora maitiro ino vimbisa kuguma kwakakwana kwezvinhu zvako zvese.
SKU: 4020201BGD Categories: zvishongedzo, Bathroom accessories Tags: rambidza, Bronze Goridhe, Single
WOWOW Pop kumusoro Simudza Rod Assembly